August 13, 2019 - ThutaSone
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးပေါ်က ရင်နာစရာ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ကျွန်တော်ကိုတစ်ခုလောက်ဒီစာလေးကိုရှယ်ပေးစေချင်တယ် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံအမေဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် နှင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတ တို့ထံ သို့/ ဒီအဖြစ်ကိုကျွန်တော်ရေးဖို့စဉ်းစားတိုင်းသူတပါးကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးနဲ့ပြန်လည်တွေးပေးမိပါတယ် ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုမှမအားတာကတကြောင်း.. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်တွေးမိတိုင်းစိတ်ထဲမှာ ကျွန်တော့်အကို ကို လက်လွတ်စပါယ်လုပ်လိုက်သောသူများအကြောင်းတွေးမိတိုင်းမဖြေဆည်နိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်။နောင်လာနောက်သားများလည်းဒီလိုအဖြစ်မျိူးမဖြစ်စေချင်ပါ။ အဖြစ်ကဒီလိုပါ ကျွန်တော့်အကိုနာမည်က ရန်နိုင်ထွန်း ပါ။နှလုံးအဆို့ကျဉ်းလို့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး မှာတက်ရောက်ကုသခဲ့ပါတယ် ။OPT ပြနေတာကတော့2နှစ်နီးပါးတော့ရှိပြီ။ […]
မိန်းမတော်တော်များကအိမ်ထောင်ကျကံကောင်းမကောင်းဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူး။ကိုယ်တွေ့ဖူးတဲ့ မိန်းလေးတွေရှိတယ်။ အိမ်ထောင်မကျခင်က ယောကျာင်္းတွေနဲ့ တယောက်ပီးတယောက်တွဲ။ တစ်ယောက်တောင်မပြတ်သေးဘူး နောက်တစ်ယောက်က အဆင်သင့်။ ဒါမဲ့ အဲ့လိုမိန်းမတော်တော်များများက အိမ်ထောင်ကျကံကောင်းလိုက်ကြတာ။သူတို့ယောကျင်္ားတွေကရွှေတဆင်ဆာကားတွေဘာတွေအပြည့်စုံထားပေးကြတယ်။ ဒါမှမဟုတ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးကြတယ်။အမြဲတမ်းတောက်တောက်ပြောင်နေရတယ်။ ဒါမဲ့ တချို့မိန်းမတွေကတော့လည်း အိမ်ထောင်မကျခင်ချစ်သူတစ်ယောက်တည်းအပေါ် သစ္စာရှိခဲ့တယ်။ သူ့အပေါ်အနှစ်နာခံခဲ့တယ်။သူတို့ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး မပြတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။သူ့တစ်ယောက်တည်းကိုသာ ချစ်ခဲ့ကြတယ်။ ဘေးမှာ တခြားယောက်ကျင်္ားတွေချစ်ခွင့်ပန်ရင်တောင်ငြင်းပယ်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ယောကျာင်္း တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်လို့မြင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲ့လောက်ကောင်းတဲ့ မိန်းခလေး […]
မီတာခတက်ခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ် တစ်နေ့တာ အတွေ့ကြုံ.. ကျောင်းအပ်ဖို့်မိတ္တူ သွားကူးတယ် A4 ကို- ယခင် 50 / ခု 70ပက်စပို့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ် – ယခင် 1000 / ခု 1500. မူကြိုအတွက် ဗလာစာအုပ်သွားဝယ်တယ်တစ်အုပ် ယခင် ၃၅၀ / ခု […]
မွန်ပြည်နယ်ကပြည်သူတွေရွေးချယ်ရကျိုးနပ်တဲ့ပြည်သူ့အစိုးရ ၈. ၈. ၂၀၁၉ ရက်နေ့မှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ ရန်ကုန် – မော်လမြိုင် – ရေး – မြိတ်လမ်း (သံဖြူဇရပ် – ရေး အပိုင်း ) မိုင်တိုင်(၄၅/၀ – ၄၆/၀) အတွင်း ဝယ်ဝင်္ကရာတံတားညီနောင် ချဉ်းကပ်လမ်းများကို ၁၃. […]
အလွယ်တကူလဲ ဝယ်ရတယ်။ ဆေးဆိုင်တွေကလဲ သားသမီးချင်းမစာနာ ရောင်းတယ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးတွေသုံးစွဲလာတဲ့ Terco-D ဆေး ပို့စ်တစ်ခု တောင်ဥက္ကလာ အထက ၃/၁ က ၉-၁ဝ တန်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးတွေနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက ၂ဝ-၂၅ အရွယ်ကောင်လေး၊ ကောင်မလေးတွေ ဒီဆေးကဒ်တွေ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် […]
ဗဟုသုတပါရေ မှာ မှတ်ဉာဏ်ရှိတယ်၊ water memory လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဗျာ.
ရေ မှာ မှတ်ဉာဏ်ရှိတယ်၊ water memory လို့ခေါ်တယ်တဲ့ molecule memory မော်လီကျူး တွေ နဲ့ မှတ်တာ လို့ ဆိုပါတယ်။ အဆိုးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရေ ကိုသောက်မိရင် ကမ္မဇီဝရုပ် ကိုထိခိုက်တယ်တဲ့။ ဒါဟာသိပ္ပံနည်းကျ စမ်းသပ်တွေ့ရှိထားတာ မို့ အံ့သြမိပါတယ်။ ယူကျူ့ မှာ နိုဘယ်ဆုရပုဂ္ဂိုလ်တဦးအပါအဝင် […]
ဗစ်တိုးရီးယား လေးကို ပြည်သူတွေထံ အပ်ပါတယ်ဟု ဆရာသက္ကမိုးညိုပြော
သမီးငယ်လေး ဗစ်တိုးရီးယားကို ပြည်သူတွေထံ အပ်ပါတယ်ဟု ဆရာသက္ကမိုးညိုပြော သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယား အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်စတင် တွေးခဲ့တုန်းက ရိုးရိုးလွယ်လွယ်လေးပဲ။ အချိန်တန်ရင် တရားခံ အစစ်ကို ဆွဲထုတ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်။ ကိုယ်ပြောတဲ့ တရားခံ အစစ်ဆိုသော အပိုင်းသည် အောင်ကြီး ဟုတ်ခြင်း မဟုတ်ခြင်းကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ […]
ရေမြှပ်မယ့် နိုင်ငံတွေအထဲမှာ မြန်မာပြည် ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပါနေတယ်လို့ မိုးလေဝသ နှင့် ဇလဗေဒ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင် နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း..
့ ရေမြှပ်မယ့် နိုင်ငံတွေအထဲမှာ မြန်မာပြည် ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပါနေတယ်လို့ မိုးလေဝသ နှင့် ဇလဗေဒ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင် နှင့် ခဏတာ “ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်မြှင့်တက်လို့ ရေမြှပ်မယ့် နိုင်ငံတွေ အထဲမှာ မြန်မာပြည် ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပါနေတယ်။ သစ်တောတွေ ပြုန်းတီးမှုက ရာသီဥတုကို […]